Shiinaha CNC router-saaraha, OEM, ODM - CHENcan CNC
Tan iyo markii la aasaasay 1998
CHENcan® waa mid ka mid ah format waaweyn bixiyeyaasha xal CNC keentay in Shiinaha, bixinta line dhamaystiran oo 5-dhidibka CNC Machining Xarumaha, CNC Mills, CNC router, iyo 3D Daabacado. In ka badan 22 sano, waxaan u hurtay in bixinta mid ka mid ah Quality-Kharashka-Saamiga xalka machining CNC ugu sareeya loogu talagalay macaamiisha our. Iyada oo ku dhowaad 200 oo khubaro xirfad leh, 18,000 ㎡ ee xarunta soo-saarka, iyo ISO 9001 nidaamka maamulidda tayada shahaado, aan bixino oo tayo sare leh xal machining CNC at qiimaha la awoodi karo.
5-dhidibka CNC Machining Center - eegis Movi ...
5-dhidibka CNC Machining Center - Table Movin ...
Large CNC Mill for Qaababka Processing Aluminum
Large CNC Mill for Processing Qaababka Wooden
Chencan AT1224AD ATC CNC Nested Salaysan router ce ...
CNC Plasma magaabay / Plasma Table
Waaxda Suuq: waxa uu masuul horumarinta macaamiisha. Ku soo dhawow oo nala soo xiriir haddii aad xiisaynayso ee xarunta 5 dhidibka CNC, router CNC, xarunta CNC caaryada, xarunta habka darfaha farcan RV, mashiinka goynta plasma iyo mashiinada goynta fiber laser. Waxaan ku siin doonaa xal fiican.
7day tan aad kastamka maxaliga ah gudahood, haddii router CNC ee qaybo ka mid uu leeyahay wax dhibaato ah, waanu bedeli doonaa si bilaash ah. Ka badan 7 maalmood tan iyo aad kastamka maxaliga ah laakiin waqtiga damaanadda 12 bilood gudahood, haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo la CNC
Kalsoonyahay oo ka mid ah Hogaamiyayaasha Industry
R Professional & D kooxda: cayn gaar ah injineerada xirfadeed, la qorsheeyo karo oo ay soo saaraan 5 dhidibka mashiinka CNC, xarunta darfaha farcan processing RV, xarunta CNC caaryada weyn iyo qalabka kale ee caadada-dhamaadka sare ...